PDF Mmezi Ngwá Ọrụ. PDF Iweghachite Software. Idozi PDF Njikwa.
DataNumen PDF Repair is kasị mma PDF mgbake ngwá ọrụ n'ụwa. Ọ nwere ike ịrụzi Acrobat rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi PDF faịlị ma gbakee ọtụtụ data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ aka na faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,637 votes)
Gịnị mere DataNumen PDF Repair?
Main Akụkụ na DataNumen PDF Repair v3.0
Nkwado iji weghachite nsụgharị niile nke Acrobat PDF faịlụ.
Nkwado iji weghachite ibe yana onyonyo na PDF akwụkwọ.
Nkwado ịrụzi dị iche iche PDF njehie usoro faịlụ.
Nkwado ịrụzi PDF faịlụ na-adịghị soro PDF nkọwapụta.
Nkwado ịrụzi PDF faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu ogbe PDF faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ PDF faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụkwa Acrobat PDF faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen PDF Repair iji weghachite mebiri emebi ma ọ bụ rụrụ arụ PDF Files
Mgbe Acrobat gị PDF faịlụ mebiri emebi ma ọ bụ mebie ma ị nweghị ike imeghe ha ọ bụla, ịnwere ike iji ya DataNumen PDF Repair i scanomi ihe PDF faịlụ na-agbake data site na faịlụ dị ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla mebiri emebi ma ọ bụ rụrụ arụ PDF faịlụ na DataNumen PDF Repair, biko mechie Acrobat Reader na ngwa ọ bụla nwere ike ịnweta ya PDF faịlụ.
Họrọ ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị rụrụ arụ PDF faịlụ a ga-arụzi:
Nwere ike itinye ihe na PDF aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ chọta PDF faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Site na ndabara, DataNumen PDF Repair ga-azọpụta ofu PDF faịlụ n'ime faịlụ ọhụrụ aha ya bụ xxxx_fixed.pdf, ebe xxxx bu aha isi mmalite PDF faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite PDF faịlụ mebiri emebi.pdf, aha ndabara maka faịlụ edozi ga-emebi emebi_fixed.pdf. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
bọtịnụ, na DataNumen PDF Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi isi iyi ahụ PDF faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ọ bụrụ na isi iyi PDF Enwere ike idozi faịlụ ahụ nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu PDF faịlụ na Acrobat Reader ma ọ bụ ndị ọzọ PDF dakọtara ngwa.
DataNumen PDF Repair 2.6 weputara na Disemba 21th, 2020
DataNumen PDF Repair A na-ahapụ 2.4 na November 6th, 2020
DataNumen PDF Repair A na-ahapụ 2.3 na November 11th, 2019
DataNumen PDF Repair A tọhapụrụ 2.1 na August 31, 2013
DataNumen PDF Repair A tọhapụrụ 2.0 na March 16, 2009
Degharịa igwe nrụzi ahụ.
DataNumen PDF Repair A tọhapụrụ 1.0 na August 4, 2005
Ngwá ọrụ dị ike iji weghachite Acrobat rụrụ arụ PDF faịlụ.